Posted by ညီရဲသစ် at 20:08
လမင်းငယ် 10 January 2012 at 20:41
တန်ဖိုးရှိတဲ့ သုံညတစ်လုံး... စာသားလေးကြိုက်တယ်
ညိမ်းနိုင် 10 January 2012 at 21:55
jasmine(တောင်ကြီး) 10 January 2012 at 23:28
Candy 10 January 2012 at 23:31
အဲ့ဂျိုကာလေးက ကိုညီရဲမလား... :D :D
jasmine(တောင်ကြီး) 10 January 2012 at 23:36
ကိုဇော် 11 January 2012 at 01:44
သုည ဆိုတာကိုသာ မရှင်းတာ။
ညီရဲ 11 January 2012 at 08:29
ဂျိုကာလေးက ကျွန်တော် မဟုတ်ပါဘူးဗျာ... သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ကို ညွှန်းဖွဲ့ ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုဇော်ရေ... သုညဆိုတာလေးက သူက တခါတခါမှာ တခြားသူတွေကို အနစ်နာခံပြီး ကူညီပေးလေ့ ရှိတယ်။ အဲဒီအခါမှာ တခြားသူတွေက သူ့ ကြောင့် တစ်ကနေ တစ်ဆယ်၊ နှစ်ကနေ နှစ်ဆယ် ဖြစ်သွားစေတဲ့ အတွက် သူ့ ကို တန်ဖိုးရှိတဲ့ သုည အနေနဲ့ တင်စားမိခြင်း ဖြစ်ပါတယ်...
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် 11 January 2012 at 14:08
သဒ္ဓါလှိုင်း 11 January 2012 at 16:21
ခုလိုကဗျာလေးနဲ့ လည်း ပုံဖေါ်တတ်တဲ့ညီရဲပါလား။ ဂျိုကာဆို ဟိုစက္ကူချပ်လေးထဲက ဂျိုကာလေးကိုမြင်မိတာကလားးးး။
မြသွေးနီ 11 January 2012 at 18:18
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) 12 January 2012 at 03:20
ပိုကာဒေါင်းရင်တော့ ဂျိုကာက သိပ်အသုံးဝင်ပေါ့..း)
ဘဝကို ဂျိုကာလို ကျရာအရပ်မှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေနိုင်တာ အကောင်းဆုံးပေါ့။ ညီရဲရေ.
အလင်းသစ် 26 January 2012 at 01:54
ဂျိုကာဆိုတာ ပိုတဲ့နေရာ မရှိပါဘူး.. နေရာတိုင်းနဲ့ ဝင်ဆံ့တဲ့အရာ.. တကယ်ဆို ကျွန်တော်လည်း ဂျိုကာတစ်ကောင် ဖြစ်ချင်ခဲ့တာ... :)
Anonymous 26 January 2012 at 13:57
Phoe Phoe, who is joker???